Media sy Fanoratan-gazety · Novambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Novambra, 2011
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Novambra, 2011
Azia Atsimo 21 Novambra 2011
Yemen: Ampangain'ireo Mpiondana Aterineto Ho manao Tatitra Mitongilana Ny Reuters
Marobe ny olona no tohina nahita fa ilay loharanom-baovao malaza sy mba nitokisany, Reuters, dia manaràma an'i Mohammed Sudam, mpandika teny manokan'ny Filoha Ali Abdullah Saleh, sady sekreterany hatramin'ny 2009, ho toy ny solotenany mivantana sy iraka manokany ao Yemen. Nandefa siokantsera ireo Yemenita, izay nanomboka nampiasa ny tenifototra #ShameonReuters tao amin'ny Twitter, no tohina tamin'ny zavatra hitany, manontany ny amin'ny mbola fahamendrehan'ny Reuters sady mangataka fanazavàna.
Afrika Mainty 13 Novambra 2011
Afrika : Inona ny tantaranao ? dia ilay tetikasa farany tontosain'nyA24 Media. Natao izany hanasongadinana ny olana iraisan'ny Afrikana sy hampiroboroboana ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra. Tamin'ny alalan'ny dinika an-tserasera no ahafahan'ny Afrikana mifanakalo hevitra sy mamaha olana ao amin'ny Afrika: Inona ny tantaranao? Ankoatra izany, manome sehatra iray ho an'ny Afrikana hitantarany ny fiainany ho an'izao tontolo izao ilay tetikasa
Azia Afovoany sy Kaokazy 09 Novambra 2011
Lasa zavamisy eo amin'ny serasera Rosiana ny firoborobon'ny mpamaham-bolongana karamaina sy ny “serasera an-takonana” ary nisy aza ny fandaharana sasany tao amin'ny televiziona Rosiana. Efa nanoratra momba ity lohahevitra ity tamin'ny antsipiriany ny Global Voices tamin'ny herintaona – nefa niakatra dia niakatra ny sandany hatrmin'izany fotoana izany; Afa-mijery izany any amin'ny vohikala hafa...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 03 Novambra 2011